सन्दर्भ भ्यालेन्टाइन डे: तीन प्रकारका प्रेम::Leading News Portal From Kathmandu
सन्दर्भ भ्यालेन्टाइन डे: तीन प्रकारका प्रेम
आज(फ्रेब्ररी १४) भ्यालेन्टाइन डे अर्थात बजारको भाषामा खासगरी मनपरेको मान्छेलाई रातो गुलाब दिएर आइ लभ यू भन्ने खास दिन रे । आज काठमाडौँ र आसपासका जंगल, पार्क, खोल्छाखोल्छी र डाँडाहरु कही खाली छैनन् । जोडीहरुले भरिभराउ छन् । आज विहानै लैलामज्नुहरुका लावालस्कार जंगल पसी सके । ठिक ठिक ठाउँमा बसीसके । प्रेम उत्सव मनाउन । भरे साँझ तिर कुइरोको काग झैं भएर फर्कछन् ।
आज गुलाबको व्यपार खुबचल्छ । प्राय लुकीछिपी गुलाब लिनेदिनेहरुको संख्या नै बढी हुन्छन । मिडियाहरुलाई पनि भ्यालेन्टाइन डेले खुब छुन्छ । नानाथरीका खबरहरु हेर्न, सुन्न र पढ्न पाइन्छ । उता विवाहीत जोडीहरु पनि उपहार र गुलाबहरु साटासाट गरी फेसबुक भरी थरीथरीका फोटाहरु पोष्ट गरेर भ्यालेन्टाइन डे मनाउँछन् । यो दिनलाई नेपालीमा चाँहि प्रेम वा प्रणय दिवस भनेको सुन्छु ।
यो नेपालीहरुले मनाउने नयाँ चाड चाँहि पश्चिमबाट आएको हो । एक जना भ्यालेन्टाइन भन्ने क्याथोलिक चर्चका सन्तले आर्मीहरुलाई विवाह गर्न निषेध हुँदा हुँदै पनि गुपचुप धमाधम आर्मीहरुको विवाह गराइदिएछन् । यसै मुद्दामा उनलाई फाँसि दिइयो रे । अनि उसैको सम्झानामा प्रेम उत्सवको रुपमा भ्यालेन्टाइन डे मनाउन थालियो भन्ने सुन्छ । खास कुरो के हो थाहा छैन यो मनुवालाई ।
सत्य जे भए पनि यो दिनले प्रेम के हो भन्ने वहसलाई चाँहि राम्रैसँग चर्चाको विषय बनाएको छ । तिनै सेरोफेरोमा रहेर केही प्रेमिल कुरा गरौं ।
प्रेम के हो ? प्रश्न सुन्दा जति सजिलो लाग्छ उत्तर दिन त्यती नै कठिन छ । वास्तवमा जे उत्तर दिए पनि त्यो अपूरो र गलत हुने खतरा हुनसक्छ । तर, आध्यात्मको धरातालमा उभिएर हेर्ने हो भने मानिसले प्रेमलाई बुझ्न सकेका छैन । अहिले जे जति कुराहरु हामीले बुझेका छौं त्यो भौतिक शरीरको धरातालमा उभिएर बुझेका छौं ।
आम मानिसको वा भनौं हाम्रो प्रेम सम्बन्धि बुझाइ गजबको छ । हामी ठान्छौंः प्रेम भनेको मानिसले मासिलाई चाहानु । उसको याद गर्नु । उसको चिन्ता र चासो लिनु । उसलाई मनपराउनु । उसको लागि धेरैथोक गर्न तयार रहनु । उपहार दिनु । यि सबै हामीले परिवारमा देख्छौं । गर्छाैं । प्रेमीप्रेमीकाको सन्दर्भमा भन्ने हो भने प्रेम भनेको उसलाई (प्रेमी वा प्रेमीका) पाउनु हो । ऊ सँग शारीरिक रुपमा एक हुनु हो । एकअर्काको शरीरमा हक जमाउनु हो । एकअर्का एकअर्काको सम्पक्ति हुनु हो ताकी चाहेको बेलमा चाहेको जसरी उपयोग गर्न सकियोस । त्यसैले हामी भन्छौं मेरो श्रीमती, मेरो श्रीमान । त्यो सम्पत्तिमा कसैले आँखा लगाएको हामी मन पराउँदैनौ । वरु लडाँइ गर्न तयार हुन्छौं । हामी प्रेमलाई शब्दमा व्यक्त गर्दछौं । म तिमीलाई माया गर्छु । यसमा अंग्रेजी शब्द अलि चलेको छः I Love you darling। एउटाले भन्छ अर्काेले मुस्कुराउँदै विश्वास गरिहाल्छ । कोही त रिसाउँछन् पनि । तिमीलाई माया गरेर त हो नि यो सबै थोक ल्याइदेको पनि भन्न भ्याउँछन् । प्रेमीका, प्रेमी, श्रीमान वा श्रीमती विच खटपट हुन्छ । सम्बन्ध टुक्रिन्छ । अनि केही समय अघि सम्म गरेको घनघोर माया फेरि बन्द हुन्छ । अनि भन्छौं म तिमीलाई घृणा गर्छु । अर्थात खल्तीमा राखेको रुमाल झैं मायालाई जसरी पनि प्रयोग गर्न सकिने रहेछ । नाकपुछे पनि भो । अत्तर छरेर यसै राखे पनि भयो ।
तपाईं हामीले जानेको माया देखिने छ । छामछामछुमछुम गर्न मिल्ने छ । खोल्न मिल्ने छ । बन्द गर्न मिल्ने छ । बोल्न मिल्ने छ । गुलाबमा अवतरण गराउन पनि मिल्ने छ । चिठीमा लेख्न मिल्ने छ । फोटोमा कैद गर्न मिल्नेछ । अधिनमा राख्न मिल्नेछ । मार्न मिल्ने छ । बचाउन मिल्ने छ । दिन मिल्ने छ । लिन मिल्ने छ । हाम्रो माया यस्तै यस्तै छ ।
त्यसैले होला आज हामी माया चाहियो भन्दै खोज्दै छौं । कोही रोज्दै छौं । मायालाई यसरी बुझ्दै छौं ।
आउनुस प्रेमलाई अर्काै पृष्ठभूमिबाट बुझौं ।
वास्तवमा हामीलाई प्रेमको बारेमा हेक्का छैन । हामीले यसलाई बुझेका छैनौं । हाम्रा किशोर किशोरीहरुले त झन के बुझुन । हामीले पनि बुझाउन सकेका छैनौं । हामीले प्रेमको सुगन्धलाई महसुस गर्न सकेका छैनौं ।
अहिले मैले प्रेमको बारेमा जुन आलेख लेखेँ यो वास्तवमा संभव छैन । प्रेम लेख्न र वोल्न मिल्ने विषय होइन । यो भाषाको सानो थैलोमा अटाउन सक्दैन । तर, मैले एउटा सानो मूर्खता गरिरहेको छु । यो सानो लेखलाई मैले ट्राफिकको वत्तीको रुपमा मात्र प्रयोग गर्न खोजेको हुँ । जस्तो ट्राफिक लाइटको रातो र रोकिनु अनि हरियो र जानु विच केही सम्बन्ध छैन तै पनि मानिसहरु रातो देख्ने वित्तिकै रोकिन्छन् । हरियो देख्ने वित्तिकै आफ्नो यात्रामा लाग्छन् । ठिक त्यसैगरी केही शब्दहरु कहुँ ठिक लागे मानिसहरु यात्रामा जान सक्छन् भन्ने मात्र मेरो चाहना हो ।
परम पूज्य सद्भगुरु ओशोले प्रेमको सन्दर्भमा वहुतै प्रीतिकर उद्घोष गर्नुभएको छ । उहाँ भन्नुहुन्छः “जब सम्म तिमीले आफुलाई प्रेम गर्दैनौ तबसम्म अरुलाई प्रेम गर्न सक्दैनौ । आफुलाई प्रेम गर्नु भन्दा अगाडि म को हुँ भनेर तिमीले आफुलाई चिन्न जरुरी छ । अनि आफुलाई चिन्नको लागि ध्यान गर्न आवश्यक छ ।”ओशोले प्रेमलाई सरल मार्ग हुँदै गहिराइसम्म लगे । प्रेमलाई घुमारो पारमा ध्यान भने । ध्यान पराभौतिक कुरो हो । ध्यानले मनिसलाई मस्तिष्क भन्दा परको अुनभव गराउँछ । देखाउँछ । अहिलेसम्म हाम्रो बुझाई केवल मस्तिष्कको हो । हाम्रो ज्ञान, वुद्धी, विवेक— जे नाम दिए पनि त्यो सबै मस्तिष्कको उपज मात्र हो । तर, ध्यानले हामीलाई मस्तिष्क भन्दा धेरै परको दुनियाँमा लैजान्छ ।
त्यसकारण यहाँनेर बुझ्नुपर्ने कुरो के हो भने प्रेम हामीले भनेझैं वस्तु होइन । शब्दमा आउँदैन । लिन दिन मिल्दैन । शरीर होइन । अब प्रेम गर्छु भनेर खोल्ने अनि फेरि यसलाई अब प्रेम गर्दिन भनेर बन्द गर्न मिल्दैन । प्रेम शरीर वा भनौं मस्तिष्क भन्दा धेरै परको एक विशिष्ठ अनुभूति हो जहाँ जीवन अडेको छ । मनुष्य जीवननै प्रेममय छ । जसरी पानीमा माछा हुन्छन । ठिक त्यसैगरी मानिस प्रेममा हुन्छ । मानिसको पानी प्रेम हो । जसरी पानीबाट वाहिर निस्केपछि माछाले थाहा पाउँछ कि पानी त मेरो जीवन रहेछ । म पानीमा रहेछु । ठिक त्यसै गरी जब मानिस पनि आफ्नो शरीरबाट वाहिर निस्कन्छ । बल्ल उसले प्रेमलाई बुझ्न सक्छ । शरीरबाट बाहिर निस्कनु भनेको निर्वाण प्राप्त गर्नु । Enlightened हुनु हो । हामीहरु जस्तो शरीरमा मात्र बाँचीरहेका मानिसहरुले प्रेमलाई वुझ्न सक्दैनौं । मुस्किल छ ।
हामीहरु अन्धाले हात्ती छामे जसरी प्रेमलाई बुझी रहेका छौं । कसैले प्रेमलाई श्रीमती देख्छन् कसैले श्रीमान, कसैले प्रेमी, कसैली प्रेमीका, कसैलै को, कसैले को । हाम्रो प्रेम नानाथरी रुपमा देखिन्छ, भेटिन्छ । हामी प्रेमको सन्दर्भमा एक भयंकर ठूलो भ्रममा बाँची रहेका छौं । यसबाट वाहिर आउनको लागि कम्तिमा हामीले आत्मसाक्षत्कार गर्न आवश्यक छ । शरीरभन्दा पर पनि अर्काे शरीर छ भन्ने अनुभव गर्नुछ । त्यसलाई जान्नु छ । अनि मात्र प्रेमलाई बुझ्न सकिन्छ । त्यसको लागि उत्तम मार्ग ध्यान हो ।
आज जो जसले गुलाब दिएर आइ लभ यू भनेका छन् र दंग परेका छन् वास्तवमा त्यो एक आकर्षण मात्रै हो । प्रेम शब्दमा आउँदैन । यो एक हृदयको अनुभूति हो । केवल अनुभव गर्न सकिन्छ । प्रेम व्यक्त गर्ने भाषा कहाँ छ र ? प्रेमलाई भाषामा मात्र व्यक्त गर्ने हुँदो हो त बोल्न नसक्नेले कसरी प्रेम गर्थे होला र ?त्यसकारण यो हृदयको एक अद्भूत अनुभव हो । गुलाबमा बेरीएर आएको प्रेम एक आकर्षणको प्रस्तुती मात्र हो । कुनै केटाले केटी देख्दा उसको शरीर मन पर्ला । जसरी हामी बगैचाँमा डुल्दा कुनै एक फुललाई खूब मनपराउँछौं त्यसैगरी घुम्दै गर्दा एक केटी वा केटाको शरीर मनप¥यो । त्यसलाई चुँड्न पाए हुन्थ्यो । सुग्घन पाए हुन्थ्यो भनेर आकर्षण पैदा हुन्छ । चाहाना सल्बलाउँछ । प्राप्त गर्ने इच्छा प्रकट हुन्छ । मनमा वास्ना जाग्छ । यो एक शरीरले अर्काे शरीरलाई आकर्षण तर्फ लैजानमात्र खोजेको हो । जब फुलमा सबै सुन्दरता र सुगन्ध सकिन्छ त्यो आकर्षण फेरि विकर्षणमा बद्लिन्छ । हामीले हाम्रा किशोर किशोरीहरुलाई बुझाउन आवश्यक छ कि तिमीले जुन कुरालाई प्रेम भनिरहेका छौ त्यो एक क्षणभंगुर आकर्षण मात्र हो । यो दुनियाँमा जसले हामीलाई माया गर्छ उसले कहिल्यै आइ लभ यू भन्दैनन् । के हाम्रा आमाबाबाले हामीलाई कहिल्यै त्यसो भने ? हाम्रा आफन्ता वा परिवारका सदस्यहरुले कहिल्यै त्यसो भनेका छन् त ?
त्यसकारण प्रेम भ्यालेन्टाइन डेको रुपमा प्रस्तुत गर्न सकिन्न । गर्नु हुन्न । ति सन्तलाई मेरो नमन छ । उनले राम्रो काम गरे । तर, हामीले बुझ्र्ने पर्ने कुरो चाँहि प्रेम कुनै भाषा वा वस्तुमा अटाएर आउने चिज होइन । यो एक हृदयको अनुपम अनुभूति हो । पवित्र प्रेमको गंगा हृदयमा बग्छ । त्यसलाई बुझ्न आवश्यक छ । प्रेम पाउने र गुमाउने चिज होइन । हामी प्रेममा छौं । जीवन प्रेममय छ । त्यसलाई केवल बुझ्न आवश्यक छ । त्यसलाई चिन्न आवश्यक छ ।
प्रेम प्रकृति हो । यो सहजतामा प्रस्फुटित हुन्छ । तर, हामीले यसलाई जटिल बनाउने प्रयास गर्दैछौं । त्यसकारण प्रेमको अभाव महसुस गरेर मानिस निराश छन् । आत्महत्या गर्छन । मलाई एक किसानको कथा याद आउँछ । एक समय पानी पर्दै परेन । बालीनाली सुकेर मरेछन् । किसान दुखीत भयो । उसले भगवानलाई पुका¥यो । जति गरेपनि पानी परेन । सारै भएपछि एक दिन उसले प्रण ग¥यो कि भोलिदेखि जब सम्म भगवानले पानी पार्दैनन् तबसम्म खेतमा केही पनि नखाइ धर्ना दिन्छु । गाउँलेले जती सम्झाए पनि उसले धर्ना रोकेन । यसरी जति धर्ना बसे पनि पानी परेन । अन्ततः ऊ त्यहीँ म¥यो । उसैको खेतमा उसलाई पुर्न छिमेकीले खन्न थाले । खन्दै जाँदा ५ फिट पनि नखनीकन पानी निस्कियो । जुन पानीको लागि उसले जीवन दियो त्यही पानीमाथि उभिएर उसले पानी मागी रहेको थियो ।
कतै हाम्रो पनि हालत त यस्तै हुँदैछैन । बुझ्न आवश्यक छ ।
यो आलेखको अन्ततिर आइपुग्दा, ओशोले चर्चा गरेका तीन प्रकारको प्रेमका बारेमा केही चचौ गरेर यो लेखलाई विराम दिन्छु । ओशोले हामीलाई सामन्य रुपमा बुझाउनको लागि प्रेमलाई वर्गिकरण गरेः
१) प्रेममा गिर्नु (Fall in Love)
२) प्रेममा हुनु (Being in Love)
३) प्रेम हुनु (Being Love)
अहिले जो किशोर किशोरीहरुले म तिम्रो प्रेममा परेँ भन्छन् । यो प्रेमगरेँ भन्दै आकर्षणमा गिर्नु मात्र हो । यसलाई ओशोले प्रेम शब्द प्रयोग गरे पनि भन्न खोजेको कुरो चाँहि आकर्ष कै हो । यो अवस्थामा मानिसहरु अरु कसैको नियन्त्रणमा हुन्छन् । जसरी हामी रिमोटले टिभि चलाउँछौं त्यसैगरी एकले अर्काेलाई चलाउँछ । यता आउ भन्छ आइहाल्छ । यसो गर भन्छ त्यसै गर्छ । कलेजबाट भागौं भन्छ, भागी हाल्छ । आमाबाबालाई ढाँटौं भन्छ ढाँटी हाल्छ । त्यसकारण यो अवस्था पर्दा महिलाहरु बलात्कृत हुने, हत्या, वेचविखन जस्ता जघन्य अपराधहरुका शिकार हुने हुन्छन् । यस्तो प्रकारको आकर्षणले मानिसलाई विनास तर्फ लैजान्छ । अंग्रेजी शब्दहरुलाई गहिरो गरि हेर्न सकियो भने पनि जीवनलाई बुझ्न सकिन्छ । यो अवस्थाका मानिसहरु कसैकोलागि प्रयोग हुन्छन् । कसैको गुलाम हुन्छन् । कसैको वस्तु हुन्छन् । आफ्नो जीवनको मोज अर्काेलै लिन्छ ।
दोस्रो प्रकारको प्रेमलाई ओशोले प्रेममा हुनु भनेका छन् । अर्थात यो अघिल्लो भन्दा वढी प्रतिकर मानिन्छ । यहाँ जब दुइजना विच आकार्षण हुन्छ । यहाँ समझदारी अलि हुन्छ । यो स्टेजमा एकअर्काको गुलाम हुनुपर्दैन । एक अर्काको सम्मान हुन्छ । यहाँ भागौं । झुट बोलौं । शोषण गरौं भन्ने कुरा हुन्न । यदि कोही यो प्रेममा छ भने उसले आफुलाई सुरक्षीत र आत्मविश्वासी ठान्छ । यहाँ शरीरप्रति संयमित आकर्षण हुन्छ । जीवनलाई समृद तथा आनन्दमय बनाउनको लागि यो स्टेजको प्रेम लागुहुन्छ । लेखक खलील जेब्रानले अत्यन्तै सुन्दर कुरा भनेको छन् । उनी श्रीमान श्रीमती विचको कुरा लेख्छन्ः हामी विवाहीत भएपनि दुबैजना यो पोखरीको वारीपारी बसौं । जब तिमीलाई मलाई भेट्ने मन हुन्छ निमन्त्रण दिनु म आउँछु । जब मलाई मन लाग्छ म पनि त्यसै गर्छु । तर, निमन्त्रणाविना कोही पनि एकअर्कालाई भेट्न नआउने । एकअर्काको स्वतन्त्रतालाई हस्तक्षेप नगर्ने । जब मानिस प्रेममा हुन्छ उसमा यस्तो प्रकारको भाव जाग्छ । एक अर्काको सम्मान हुन्छ । यसलाई हल्का हल्का प्रेमको अनुभूति भएको वा मिसिएको आकर्षण भन्न सक्नुहुन्छ । यहाँ वोध र अनुभूति प्रगाढ हुने हुँदा क्षतिको संभावना एकदमै न्यून हुन्छ ।
तेस्रो चरणको प्रेमलाई ओशोले प्रेम हुनु भनेको छन् । जब मानिस यो चरणमा पुग्छ ऊ अब एक सत्त प्रेम मात्र हुन्छ । जस्तो बुद्ध भए । जस्तो ओशो भए । जस्तो महाविर भए । जस्तो कविर भए । जस्तो जिसस भए । उनीहरुको जीवनको पूर्ण प्रस्तुती प्रेममय बन्यो । महाविरलाई ढुंगा हान्थे मानिसहरु तर उनी मुस्कुराउँथे । बुद्धलाई थुक्थे मानिसहरु तर उनी मुस्कुराउँथे । जिससलाई झुन्ड्याए तर उनी यि सबैलाई क्षमा दिनुप्रभु भन्दै प्रार्थन गर्दे । जसरी वृक्षमा बसन्त आउँदा हरियाली र फूलहरुले ढकमक्क ढाक्छ ठिक त्यसैगरी जब मानिस प्रेम हुन्छन् तब जीवन औलोकिक बन्छ । जीवन प्रेमको सुगन्धले भरिपूर्ण हुन्छ । प्रेम हुनु मानिसको प्राकृतिक स्वरुप हो । विभिन्न कारणले हामीहरु प्रदुषित भयौं । बागमती जस्तै । तर, यसलाई सफा गर्न सकिन्छ । कठिन छ होला तर सफा गर्न सकिन्छ । प्रेम हुन सकिन्छ ।
जीवन प्रेम । प्रेम जीवन । वाँच्नु प्रेम । फक्रनु प्रेम । मृत्यु प्रेम । प्रेम एक वह्मण्ड । थाहा छ त्यसैले थाहा पाउन कठिन छ ।
विवेक विनयी वु.न.पा. वडा नं. १० कपन स्थित जुगल स्कूल/कलेजका प्राचार्य तथा प्याब्सन काठमाडौँ जिल्ला कार्यसमितिका सदस्य एवं तालिम विभागको सचिव साथै लेखक पनि हुनुहुन्छ । उहाँको दुइ पुस्तक बजारमा आइसकेको छ ।